Ity ny fomba famafana ny tantaran'ny fijerena Netflix | la-manette.com
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroantsika dia efa zatra mizara ny kaontintsika Netflix amin'ny namana na fianakaviana. family. Lasa fanaon’ny fitsitsiana vola sy ny fanatanterahana ny asa izany. Saingy rehefa mizara kaonty Netflix ianao dia afaka mitandrina kely kokoa amin'izay jerenao.
Na dia afaka mamorona mombamomba samihafa foana aza ianao, dia mbola afaka manamarina ny tantaran'ny fijerenao ny olona izay afaka miditra amin'ny kaontinao. Raha manontany tena ianao hoe ahoana no fomba hijerena ny tantaran'ny fijerena Netflix anao dia aza misalasala mamaky ny torolàlana.
Ahoana anefa raha te-hamafa ny tantaran'ny fijerena Netflix ianao? Soa ihany fa misy fomba hanaovana izany. Voalohany, andao hiresaka momba izany eo amin'ny biraonao.
Ahoana ny famafana ny tantaran'ny fijerena Netflix amin'ny solosaina desktop?
Dingana mora izany, ary ny hany ilainao atao dia ny manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany mba hanadio ny tantaranao fijerena Netflix.
1. Midira ao amin'ny Netflix amin'ny solosainao desktop.
2. Mandehana any amin'ny mombamomba anao eo amin'ny zoro havanana havanana ary mifidiana "kaonty".
3. Ankehitriny tsindrio eo amin'ny "mijery hetsika" safidy.
4. Azonao jerena izao ny tantaran'ny fijerenao manontolo ao amin'ny Netflix.
5. Mandehana mankany amin'ny farany ambany ary tsindrio ny safidy "manafina ny rehetra".
Izay ihany, ary voafafa izao ny tantaran'ny fijerenao. Raha manana mombamomba marobe amin'ny Netflix ianao dia mila manaraka ny dingana voalaza etsy ambony ho an'ny mombamomba tsirairay. Ankafizo ny anao mivantana tsiambaratelo!
Vakio ihany koa: Ahoana ny fizarana lalao amin'ny PS5
Ahoana no hanadiovako ny tantaran'ny fijerena Netflix amin'ny findaiko?
Raha eo amin'ny findainao ianao dia tsy miova ny ankamaroan'ny dingana. Mandehana any amin'ny fampiharana Netflix anao, avy eo Accounts. Na izany aza, raha te hiditra amin'ny pejy manaraka ianao dia mila miditra amin'ny navigateur ary "mangataka tranokala desktop". Araho avy eo ireo dingana roa farany voalaza ao amin'ny dikanteny teo aloha.
Izany no momba ity lahatsoratra ity. Manantena izahay fa afaka mandefa ny anao izao ianao sarimihetsika/ seho ankafizinao ao amin'ny Netflix tsy misy manahirana, na dia mizara ny kaontinao amin'ny olona maro aza ianao.
Ahoana ny fanamboarana ny fefy BSI tsy nahomby